Fikarohana momba ny firaisana Ny fananganana fanahy avy amin'ny zavaboary ara-panahy: Ny tantaram-piainana taloha momba an'i Bessie Gordon | Jenny McLeod - Fikarohana momba ny vatana teraka
Mpikaroka: HWS Muir manaja sy Ian Stevenson, MD
Tao anatin'ny fiainana taloha, Little Jenny dia mahatsiaro ny famelomana ny renibeny, ny kisoa ary ny alika kely
Jenny McLeod dia teraka tamin'ny novambra 7, 1949 tany Aberdeen, Ecosse. Ny ray aman-dreniny dia Hamish sy Margaret McLeod ary tsy ela dia nipetraka tany Tore, akaikin'i Inverness ny fianakaviana.
Afaka niteny i Jenny tamin'ny fotoana maha-iray taona azy. Rehefa roa taona i Jenny no nanao fanambarana mikasika ny fiainana teo aloha. Izy dia notohanan'ny renibeny, Maria Gordon no anarany. Miaraka amin'i Margaret, reniny, nipetraka teo akaiky teo, dia hoy i Jenny tamin'ny renibeny:
"Tadidinao ve aho fony aho efa zatra nanome sakafo anao, Grannie?" (1)
Avelao i Ian Stevenson, MD, hamariparitra ny zava-nitranga manaraka:
"Toa nofaritan'i Jenny avy eo ny havoana antsoina hoe The Mankanesa ao Portree. Niresaka momba ny trano iray tao izy, izay misy seranana kely ihany. Niresaka dingana vitsivitsy izy izay nanome fomba fohy kokoa hankanesana ny trano amin'ny alàlan'ny fandehanana an-tampon'ny havoana, fa tsy ny fampiasana ny lalana izay mihodina amin'ny The Lump. Niresaka momba ny 'alika kely mahafinaritra' nananany izy. (Ny McLeods dia tsy nanana alika samirery, na lehibe na kely.} ”(2)
Ny reniny, Margaret, dia nitantara fa lasa matory i Jenny, raha vao tapitra ny sakafony. Noho ny hafanam-pony, dia nitsahatra tsy niteny i Jenny ary tsy niresaka momba io fiainana lasa teo iny intsony izy.
Fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainan'i Jenny taloha
Ny McLeods dia nilaza tamin'ny minisitra, Manehoa HMS Muir, momba ny fanambaràn'i Jenny, izay nanoratra ny famintinana ilay raharaha. Nalefa tany amin'ny mpiara-miasa amin'i Ian Stevenson tao Edinburgh ny famintinana, izay namoaka ny famintinana an'i Stevenson.
Tao amin'ny 1967, dia nandeha tany Tore, any Ekosy i Stevenson, mba hikaroka ilay raharaha. Stevenson dia nanadinadina ny fianakaviany ary nanamafy izy fa tsy nianatra ny antsipiriany momba ity fiainana efa hatry ny ela ity i Jenny amin'ny alalan'ny fomba mahazatra.
Margaret McLeod nilaza tamin'ireo mpikaroka fa ny fanambaran'i Jenny dia mifanaraka amin'ny fiainan'i Bessie Gordon, renibe reniben'i Jenny.
Bessie dia teraka tao 1865 tany Portree any amin'ny nosin'i Skye, toerana niainany nandritra ny androm-piainany. Nipetraka tany amoron-dranomasina izy, ary nanana trano iray misy zana-pieridana, izay hany tokana tao amin'ny faritra. Ny tranony koa dia teo akaikin'ny havoana iray antsoina hoe The Lump, izay sary etsy ambony.
Nisy ny dingana na ny fiakarana teo amin'io havoana io, izay nanome fehin-ketra mba hahatongavana any an-tanànan'i Seafield. Azo ampiasaina io fehikibo io fa tsy mandeha amin'ny Lemaka.
Ho tombontsoam-pirenena, i Bessie dia nanangana West Highland Terriers. Tsarovy fa nanao fanambarana momba ny "alika kely tsara" izay nananany i Jenny.
Fametrahana ny fanahy avy amin'ny Fanahy Rehetra: Manomana ny hoaviny hoavy i Bessie
Nanan-janaka sivy i Bessie, ny iray tamin'izy ireo dia i Mary Gordon, izay renin'i Margaret ary reniben'i Jenny. Tadidio fa i Mary Gordon no nanome sakafo an'i Jenny rehefa nilaza ny fiainany taloha izy.
Bessie dia tia ny renibeny Margaret, renin'i Jenny. Tahaka izany, hita fa i Bessie, avy any amin'ny tontolon'ny fanahy, dia nanao fandaharana mba hiverenana indray ary teraka tamin'ny iray tamin'ireo zafikeliny vavy, Margaret McLeod.
Bessie dia maty tamin'ny taona 83, tao amin'ny 1948. Rehefa teraka tao amin'ny 1949 i Jenny, dia niverina indray i Bessie indray mandeha herintaona taorian'ny nahafatesany.
Fitoviana ara-batana: Nieritreritra i Margaret, renin'i Jenny fa nitovy tamin'ny renibeny, Bessie, i Jenny, tamin'ny fanorenana na fikambanana ara-dalàna. Margaret dia nanamarika fa ny fanorenan'i Bessie sy Jenny dia tena miavaka amin'ny mpianakavy hafa. Tsy nisy filazana hoe nisy ny endriky ny tarehy. Mazava ho azy, ny fitoviana eo amin'ny fananganana dia mety ho vokatry ny fototarazo, satria izany dia miteraka tranga mitovy amin'ny an'ny vatana hafa.
Innate Talent: Hitan'i Margaret fa mitovy amin'ny an'i Bessie i Jenny "tamin'ny fomba fiteniny sy ny fomba fanaovany zavatra." (3)
Ankoatra izany, i Jenny sy i Bessie dia samy nanandrana nanamboatra lasopy sy dihy avo lenta, na dia niaiky aza i Margaret fa ny tovovavy hafa dia manana ireo toetra ireo ihany koa.
Zava-dehibe kokoa, i Jenny sy Bessie dia tsy manan-tsahala avy amin'ny olona hafa ao amin'ny fianakaviana satria samy tia mamaky izy ireo ary samy manana feon-kira tsara. Araka izany, dia toa nisy talenta iray natao hihira avy tamin'ny fampodiana iray hafa.
Fandaminana fanahy sy vatana vaovao ao amin'ny fianakaviana: Araka ny efa nomarihina, toa i Bessie no toa nanomana ny fiverenany ao amin'ny vovoka indray vao teraka mba ho teraka amin'ny iray amin'ireo zafikeliny ankizivavy Jenny McLeod.
1. Stevenson, Ian: tranga eropeana an'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Company, Inc., 2003, p 56
2. Stevenson, Ian: tranga eropeana an'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Company, Inc., 2003, p 56
3. Stevenson, Ian: tranga eropeana an'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Company, Inc., 2003, p 58